Saafi Films - News: Deg Deg:Saxaafada oo la iskugu yeeray Xarunta Madaxtooyada iyo Raysalwadaaraha oo lagu dhawaaqi rabo.
Deg Deg:Saxaafada oo la iskugu yeeray Xarunta Madaxtooyada iyo Raysalwadaaraha oo lagu dhawaaqi rabo.
Saxafiyiin ajaanib iyo Somali iskugu jirta oo goor dhaw gaaray xarunta madaxtooyada Villa Somalia ayaa soo sheegaya in dhamaan warfidiyeenku diyaar yihiin lana sugayo madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha Somalia uu raysalwasaare umagacaabi doono Siciid Faarax Garaad oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka Gedo ee Koofurta Galbeed Somalia.
Shadoor Xaaji Shadoor oo ka mid ah Xubnaha warfaafinta uqaabilsan Xafiiska Madaxweynaha Somaliya ayaa sheegay in saacado yar kadib Xasan Shiikh uu ku dhawaaqayo Wasiirka 1aad saxaafaduna ay diyaar yihiin.
Warbaahinta muqdisho ka howlgasha ayaa indhaha ku heysa xarunta madaxtooyada dhawaqa kasoo baxaya halkaasi iyadoona si weyn shacabku uwada sugayaan magacaabista Raysalwasaaraha Cusub ee Somalia.
4,494,856 unique visits